Taiwan iyo Somaliland:- Dowladda Ay Somaliland Xidhiidhka La Yeelatay Yaa Aqoonsan, Maxayse tahay? | Gaaroodi News
Taiwan iyo Somaliland:- Dowladda Ay Somaliland Xidhiidhka La Yeelatay Yaa Aqoonsan, Maxayse tahay?
Wasiirka arrimaha dibadda Somaliland iyo madaxweynaha Taiwan.
Todobaadkii hore Wasiirka arrimaha dibadda ee Taiwan ayaa sheegay in iyaga iyo Somaliland ay ku heshiiyeen in midba midka kale uu xafiis ka furto deegaannadooda.
Bishii Febraayo ee sanadkan, Taiwan oo iyadu xitaa ay ictiraaf raadineyso ayaa heshiis is-afgarad ah la yeelatay Jamhuuriyadda Iskeed Madaxbannaanida ugu dhawaaqday ee Somaliland.
Arrintaas ayaa markiiba waxa cambaareysay dowladda Federaalka ee Soomaliya.
Shiinaha dhankiisa wuxuu bogaadiyay go’aanka dowladda Soomaaliya ay ku cambaareysay kullan dhawaan dhexmaray madaxda Taiwan iyo mas’uuliyiin ka socday Jamhuuriyadda iskeed ugu dhawaaqday maxbanaannida ee Somaliland.
Madaxtooyadda Soomaaliya ayaa dhawaan sheegtay in Muqdisho iyo Beijing ay dhowrayaan madaxbannaanida iyo midnimada dhuleed ee labadooda dal, ka dib kulan uu madaxweynaha la qaatay safiirka Shiinaha u fadhiya Soomaaliya Qin Jian.
“Dowladda Soomaaliya waxay xaqiijisay in dadaalkeeda ku aadan hubinta qiyamka iyo mabda’a Shiine mid ah isla markaana uu cambaareeyay tallaabada Taiwan ee wiiqeysay madaxbanaanida dhuleed ee Soomaaliya, waana ugu mahadcelinayaa arrintaas,” ayaa lagu yiri qoraal barta Twitter-ka uu ku soo qoray afahayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha.
Haddaba, Maxay tahay Taiwan?
Jahwareer iyo khilaaf ayaa ka taagan waxay Taiwan tahay iyo weliba wixii loogu yeeri lahaa – dal mise gobolka k tirsan Shiinaha. Madaxweynaha hadda ee Taiwan, Tsai Ing-wen
Taiwan waa Jaziirad leh wax walbo oo madaxbanaani ay ku heli karto, tan iyo sanadkii 1950kii, balse Shiinaha wuxuu u aqoonsanyahy gobol ka mid ah dhulkiisa oo gooni is taag doonaaya, waxaase lagu qasbayaa in ay ka mid tahay Shinaha xita hadii “xoog loo adeegsanaayo”.
Shiinaha ayaa bilaabay inuu sheegto Taiwan in ay dhulkiisa qeyb ka tahay sannadkii 1949kii, wixii ka dambeyay dagaalkii sokeeye ee Shinaha.
Xilligaa waxay ahayd markii laga adkaaday dowladdii wadaniyiinta ee Shiinaha oo kadibna u qaxay Jaziradda waxaana awoodda la wareegtay xukumaddi Shuciyiinta ee uu hogaaminayay Mao Zedong.
Afrika iyo Taiwan
Daafaha caalamka, in ka yar 20 dal ayaa hadda Taiwan u aqoonsan waddan madaxbannaan.
Sannadkii 2018-kii, dalka jamhuuriyadda Dominican aya dhanka Shiinaha u wareegatay. “Waa saameynta dunida, taiwan na taageero ayey sii lumineysaa,” ayuu yiri nin arrimaha caalamka ka faallooda oo lagu magacaabo Khan-Maxamed.
Dadka qaar waxay sheegaan in taageerada ay Taiwan lumisay ay sababtay in dal ahaan looga aqoonsan waayo caalamka.
Marka Qaaradda Afrika la eego, Shiinaha mar buu ka ahaa wax aan si wayn looga taageerin, Taiwan na ay xoog ku leedahay. Balse hadda waxay u muuqataa in Taiwan laga masaxay qaaradda. Taiwan waxay markasta ka feejigantahay suuragalnimada weerar kaga Yimaada dowladda Shiinaha.
Horraantii 1960-meeyadii, xilligii Afrika ay qaadaneysay madaxbannaanida, Wakiillada Beijing iyo Taipei – caasimadda Taiwan – waxay doonayeen in xiriir adag oo diblumaasiyadeed la yeeshaan Afrika.
Taiwan waxay diiradda saartay caawinta beeraleyda Afrika ee bariiska soo saara. Taageeradaas waxay ahayd mid salka ku haysay arrimaha tiknolojiyadda iyo tababaridda beeraleyda. Taiwan waxay maalgelisay barnaamijkaas, waxayna dalalkii ay xulafada ahaayeen ee Afrika qabteen shir wayne.
Inta badan, 196-meeyadii, Taiwan waxay Shiinaha kaga guuleysatay Afrika, marka la eego dhanka xiriirka diblumaasiyadeed. Balse xiriirkaa wuu sii baaba’ayay marba marka ka dambeysa. Taageerada bini-aadamnimo ma uusan u horseedin helidda taageero siyaasadeed, waxaana taas ay sababtay in Taiwan laga diido Qaramada Midoobey.
Sannadkii 1971, Golaha Guud ee Qaramada Midoobeey wuxuu mariyay qaraar Taiwan u diiday in kursi ay ka hesho xarunta UN ee Mareykanka, waxaana lagu xaqiijiyay kusriga Shiinaha ee Golaha uu ku leeyahay
Illaa 27 dal oo Afrika ah ayaa qaraarkaas u codeeyay, taas oo si rasmi ah loogu diiday in Taiwan ay tahay dal madaxbannaan. Sidoo kale, 12 dal oo Afrika ah ayaa Mareykanka taageeray waxayna diideen qaraarkaas.
“Qaramada Midoobey oo ay ka maqan tahay, iyo codkeeda oo aan la maqleynin, taiwan waxaa markasta ku sii xumaaneysa xaaladda”.
Wixii ka dambeeyay 1990-maadkii, Taiwan waxay tallaabooyiin adag u qaatay sidii ay caalamka uga heli lahayd aqoonsi.
Qaaradda Afrika, taas waxay uga heli kartaa in maalgashi ay ku badalato xiriir diblumaasi. Sannadkii 1992, illaa $50 milyan oo dollar oo deyn ah oo ay Niger siisay waxay kaga badalatay aqoonsiga dal ahaan. Seddax sano ka dib, Taiwan waxay $35 Milyan oo dollar siisay Gambia si isla arrintaas aqoonsiga uga hesho.
Maalgashiga waa muhiim, balse laguma iibsan karo daacadnimo. Taiwan waxay markasta la safan tahay hoggaamiyeyaasha taageera madaxbannaani iyo dimuquraadiyad.
Taas waxay sababeysaa in hal dal uu dhowr goor is bedbedelo; in marna uu aqoonsado Taiwan marka uu xiriir la yeesho Shiinaha.
Sababaha Shiinaha uu guusha u gaarayo waxay tahay in uu diiradda saaro maalgashiyo ballaaran oo balaayiin dollar ay ku bexeyso taas oo deyn ku ah dalalka Afrika, iyo galaangal militari ee uu leeyahay.
Shiinaha ayaa ku adkeysanaya in wadamada caalamka aysan xiriir diblumaasiyadeed oo toos ah uusan kala dhaxeyn karin Taiwan, taas oo keentay in xiriirka Taiwan ee caalamka uu koobnaado.
Mareykanka ayaa ah saaxibka ugu muhimsan iyo difacaha Taiwan. Iyadoo go’doon ku jirto Taiwan waxay door fiican ka qaadatay koboca dhaqaalaha Aasiya, waxayna ka mid noqotay kuwa ugu sareeya dunida ee soo sara combuyuutarada. Taiwan kursi kuma lahan Qaramada Midoobay, waxayna kursigeedi ku weyday Shiinaha oo sannadkii 1971-gii meesha buuxiyay. Dadaallo badan oo ay u gashay in ay dib u hesho ka dibna wa ay ku guuldareystay.
Bilowgii 1990-kii, Taiwan waxay isku badashay demoquradi, xukumadii xilka haysayna wuxuu waqtigeeda dhamaaday sannakii 2000, markaas oo doorashadii madaxweynaha ee la qabtay lagu soo doortay Chen Shui-bian oo ahaa mucaaradka xisbiga demoquraadiga.
Halkeey hadda wax marayaan?
Ka dib tobaneeyo sano oo labada dhinac ay u dhaxeysay xisad aad u daran, xiriirka Shiinaha iyo Taiwan wuxuu bilaabay inuu soo hagaago dhowaanahan.
Shiinaha ayaa keenay hannaan cusub oo ahaa “hal dal iyo labo hanaan”, kaas oo Taiwan u saamaxaya in ay noqoto maamul goboleed, waa haddii ay aqbasho midowga Shiinaha.
Haseyeshee dalbkii Shiinaha waa lagu gacan seeray, Taiwan na waxay dabcisay sharuucdeeda booqashada Shiinaha iyo in maalgashi lagu sameysto Shinaha.
Sidoo kale sannadkii 1991-gii ayay Taiwan ku dhawaaqday inuu dhamaaday waxay ugu yeertay dagaalkii ka dhanka ahaa dadka ka soo jeeda Jamhuriyadda Shiinaha.
Xukumadda Beijing ayaa soo baraarugtay sannadkii 2000 kadib markii madaxweynanimo loo doortay Chen Shui-bian, oo si bareer oo cad u taageeri jiray madaxbanaanida Taiwan.
Sannadkii 2008 waxa madaxweynanimo loo doortay Ma Ying-Jeou, oo oo wacad ku maray inay wanaajin doonto xiriirka Taiwan iyo Shiinaha ka dhaxeeyo, gaar ahaan ganacsi. Chiang Kai-shek wuxuu hoggaaminayay Shiinaha ka hor intaan dagaal sokeeye uusan uga adkaan Mao Zedong. ka dib wuxuu u qaxay Jasiiradda Taiwan.
Doorashadii halkaas ka dhacday 2016-kii waxaa madaxweynanimo loo doortay Tsai Ing-wen oo ka soo jeeda xisbiga demoqoradiga oo doonaysa in ay Taiwan madaxbanaani hesho.
Waqtiyadii ay soo martay
Qaar ka mid ah taariikhda muhiimka ah ee Taiwan ay soo martay:
1683 – Waxay jasiiradda hoostagtay maamulkii Shiinaha ee uu hoggaaminayay Boqor Qing.
1895 – Shiinaha – waxaa looga guuleystay dagaalkii ugu horreeyay ee Sino-Japanese – Taiwan na waxay martay dhankii Japan.
1945 – Taiwan waxay dib ugu noqotay gacanta Shiinaha ka dib markii japan looga guuleystay Dagaalkii labaad ee Dunida.
1947 – Ciidamaddii qarannimo-doonka ee jasiiradda oo dhan ayaa burburay, iyadoo saraakiishii taiwan ay la daadaa-dhacayeen musuqmaasuq. Waxaa dagaalkii sokeeye ee xilligaas ku dhintay kumannaan qof. Dhacdadaas waxaa loo garanayaan Xaaladdii 228.
1949 – Hoggaamiyihii ay wadaniyadda ku waynayd, Chiang Kai-shek ayaa dagaalkii sokeeye waxaa uga adkaaday Mao Zedong, oo hoggaaminayay ciidamadii shuuciyiinta. Ka dib Kai-shek wuxuu u qaxay Taiwan. Wuxuu jasiiradda hoggaminayay tan iyo 1975-tii oo uu dhintay.
1950-meeyaddii -1960-meeyadii – Waxay Taiwan sameysay koboc degdeg oo dhanka warshadaha ah.
1971 – Qaramada Midoobey ayaa dowladdii Shuuciyiinta ee Shiinaha u aqoonsatay dowladda keliya ee dhulwaynaha dalkas maamusha. Ka dib dowladdaas waxay la wareegtay kursigii Golaha Amniga ee Qaramada midoobey.
1979 – Xukuummaddii Washington ee Mareykanka ayaa sidoo kale u wareegatay dhanka Beijing, waxayna ka goosatay Taipei. Muddo kooban ka dib, Congress-ka Mareykanka wuxuu ansixiyay sharci ogolaanaya taageero lagu difaaco jasiiradda.
1987 – Taiwan waxay qaatay sharci degdeg ah oo saarnaa muddo 40 sano ah, waxaana la fududeeyay xannibaadii dhanka safarada ee Shiinaha.
2000 – Codbixiyeyaasha ayaa doortay xisbiga Dimuquraadiga iyo Barwaaqada, markii ugu horreysay, taasna waxay soo afjartay maamulkii qaatay 50-ka sano ee wadaniyiinta.